Ngwa Vivavideo na-emetụta 50 nde ngwaọrụ gam akporo | Gam akporosis
Vivavideo ngwa na-emetụta 50 nde ngwaọrụ gam akporo
vidio dị ndụ dị n'anya ajọ ifufe ahụ mgbe ọ matara na ngwa ahụ nwere AndroidOS / AndroRat Trojan, ruo ugbu a ọ dịghị ihe ọzọ na-emetụta Gam akporo usoro ngwaọrụ. N'ihi ikike nke Trojan a, ndị mwakpo nwere ike ijide data dị mkpa, gụnyere ozi ụlọ akụ, akaụntụ PayPal, na ịnweta cryptocurrencies.
The video edezi ngwá ọrụ bụ nnọọ ewu ewu, e nwere 50 nde nrụnye na ngwaọrụ na Google usoro na ọtụtụ na-mie ghara ihichapụ ngwa. Ngwa a mepụtara Quvideo na-arịọ ikikere maka ikike ideziN'ime ikike ndị a chọrọ bụ ndekọ oku, ikike GPS, ma gụọ ma dee ikikere na sistemụ gam akporo.
Ngwa wepụrụ na Playlọ Ahịa Play
Google ngwa ngwa wepu ya na ụlọ ahịa ahụ mgbe akụkọ ahụ malitere na VPNPro, 3 afọ gara aga Quvideo nwere nsogbu na otu n'ime ngwa ya mgbe achọpụtara spyware. Maka ugbu a emetụta ngwa gam akporo ma ọ bụghị na iOS, ebe ọ na-egbochi ojiji nke ikikere megide ngwa ọjọọ.
Mana ọ naghị emetụta ihe ọ bụla ọzọ karịa Vivavideo, a na-emetụta ngwa Quvideo ndị ọzọ, yabụ ọ ga - ekwe omume na ọ bụrụ na ịnwụnye, ọ ga - abụ ihe amamihe dị na oge a iji kpochapụ ya. Iji mee nke a, anyị nwere ike ime ya n'ụzọ abụọ dị iche iche, otu bụ ịga Ntọala> Ngwa na ificationsma Ọkwa> pịa na ha wee pịa "Uninstall", nke ọzọ bụ pịa ya ma zipụ ya na ihuenyo ahụ, nri na ahịhịa ahịhịa.
Ngwa ndị ọzọ eji egwu egwu
Na akụkọ VPNPro ha kwukwara nke ahụ VidStatus, Vivacut na Tempo na-edobe otu ụdị nke Vivavideo, ya mere, ọ ga-adị mma ma ọ bụrụ na ịnwee ya iwepụ ya. O nwere otu VidStatus, Vivacut na Tempo Trojan ma rịọ ikikere nke anaghị eji ngwa ọ bụla iji dezie vidiyo na ekwentị gị.
Ọ bụ ihe amamihe dị na ya ime ihe ọ bụla ọzọ karịa ihichapụ ya, ebe ọ bụ na ọ nweghị nke ọ bụla ọ ga-ekwe omume ịtọgharịa ikikere Vivavideo, opekata mpe ugbu a.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Vivavideo ngwa na-emetụta 50 nde ngwaọrụ gam akporo
Enwere m VivaVideo PRO, nke na-efu m ezigbo ego.
Onyeka Onwenu dijo
Ezi Kelonic, maka nke a, ị ga-eleba anya na ikikere ị na-eji na ngwa ahụ.
Gaa na Ngwa na ificationsma Ọkwa> Nke di elu> Ikike ikike> Họrọ ikikere wee hụ ọ bụrụ na ọ na-arịọ gị ikikere nke anaghị adịkarị maka ngwa a, lelee na ọ bụghị ndị m dere ka ị ghara inwe nsogbu.
I nwere ikike:
Echere m na ịchọrọ ha ka ha nwee ike idezi, gbaa ma chekwaa vidiyo ahụ.
Anọ m jụụ.
Ana m emeghachi ekele
Zuru oke, na ụdị ahụ ọ dị ka ọ emetụtaghị gị, ha bụ ikikere ndị dị mkpa iji nwee ike ịrụ ọrụ.
I meela, ihe ọ bụla ị ga-ahapụ m ikwu ma anyị ga-enye gị aka.
Etu ị ga-esi hazie ekwentị gam akporo gị
Bullet Echo bụ Zeptolab nke kachasị 'ọgụ royale', ndị na-eme Cut the Rop